လစာ ဘယ်လောက် တောင်းသင့်သလဲ? Let’s figure out what you’re worth. - MyWorld
လစာ ဘယ်လောက် တောင်းသင့်သလဲ? Let’s figure out what you’re worth.
Posted on 14/12/2016 by Haymar SuSuSan
‘အလုပ်ရဖို့ ခက်လိုက်တာ…’ ဆိုတဲ့ ညည်းသံအများစုရဲ့တရားခံက ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အရှိန်ရလာတဲ့အတွက် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားဈေးကွက်ဟာ အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုရှိသလို၊ မကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ လစာဘယ်လောက်တောင်းသင့်သလဲဆိုတဲ့အချက်က အစ ဆုံးဖြတ်ဖို့ မလွယ်ကူတော့တာတွေ့ရမှာပါ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေက ကိုယ်လစာ ဘယ်လောက်တောင်းသင့်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၁။ ဈေးကွက်ကို လေ့လာပါ။
ဘယ်ကုမ္ပဏီမဆို ၀န်ထမ်းတွေကို ထိုက်သင့်တဲ့လစာပေးဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ ဈေးကွက်မှာ ဘယ်လောက် ရှိနေသလဲဆိုတာ အရင်လေ့လာကြပါတယ်။ အဖြစ်နိုင်ဆုံးက ကိုယ့်ရဲ့ Competitor ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီက ဘယ်လောက်ပေးနေသလဲဆိုတာ ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်က သူတို့အတွက် မမျှတတဲ့ လစာကို တောင်းဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင် အလုပ်အင်တာဗျူးဝင်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးက နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ CV ပြင်တဲ့အခါ၊ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ အချိန်ယူရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက်ရော၊ သူတို့အတွက်ရော အလကားအချိန်ကုန်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင် အစကတည်းက Company အနေအထားကိုကြည့်ပြီး လစာကို တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ တိုင်းတာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်တွေ့အကျဆုံး လစာတိုးတောင်းသင့်တဲ့အနေအထားကို စဉ်းစားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၄၀% ဟာ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာ ဆယ်သိန်းရနေတယ် ဆိုပါစို့။ အလုပ်သစ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့မျှော်မှန်းလစာက ဆယ့်လေးသိန်းဝန်းကျင်ဆိုရင် ဒါဟာ အလုပ်ရှင်တော်တော်များများ လက်ခံစဉ်းစားနိုင်တဲ့ ပမာဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ပုံသေနည်း တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ပြောင်းမယ့် အလုပ်သစ်ပေါ်မူတည်ပြီး အဆင်ပြေသလို Adjust လုပ်ပြီး စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
၃။ ကိုယ့်ရဲ့ Flexibility ကိုကြည့်ပါ။
Flexibility ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရေးအခြေအနေအတွက် လုံလောက်မယ့် ပမာဏတစ်ခုကို ပျမ်းမျှတွက်ချက်ကြည့်ပြီး တောင်းဆိုရမယ့်ပမာဏကို ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ ကိုယ်က စားဝတ်နေရေးအတွက် တစ်လကို သုံးသိန်းလောက် ကုန်ကျတယ်ဆိုပါစို့။ မိသားစုကို ထောက်ပံ့တာ တစ်သိန်း၊ ပြီးရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ တခြားမမြင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေအကြောင်းတရားတွေအတွက် တစ်သိန်း ချန်ထားရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့တစ်လစာဝင်ငွေဟာ ငါးသိန်းထက်နည်းနေရင် အလုပ်ကို သေချာ အာရုံစိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ ၀ါသနာပါတဲ့ပျော်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ကို Balance ပျက်သွားနိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးဆိုရင် နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
၄။ အလုပ်သစ်ရဲ့Location (နေရာ)၊ တခြား Benefits, Allowances နဲ့ ကိုယ့်အတွက် Career Development တွေကို ကြည့်ပါ။
လစာတောင်းမယ့် ပမာဏကို ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေထည့်ပြီး စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မျှော်မှန်းလစာကို ပေးနိုင်ပေမယ့် အလုပ်နေရာက အရမ်းဝေးနေတဲ့အခါ ကုန်ကျမယ့် သွားလာစရိတ်ဟာ ထည့်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်လို Taxi တွေနဲ့ သွားလာရတဲ့မြို့ဆိုရင် ပိုပြီးသေချာတွက်ချက်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ မျှော်မှန်းလစာကို မပေးနိုင်ပေမယ့် ဖယ်ရီရှိတာမျိုး၊ Saturday, Sunday ပိတ်တာမျိုး စတဲ့ Facilities တွေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ခုနကအချက်ကို လျှော့ပေါ့စဉ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်တွေဟာ အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား ၀န်ထမ်းတွေကို ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီး ယေဘုယျ သဘော ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အလုပ်မလုပ်ဖူးသေးတဲ့ ဘွဲ့ရကာစလူငယ်တွေဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ကိုယ်အလုပ်လျှောက်ချင်တဲ့ Company က ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အခြေခံလစာကို လေ့လာပြီးမှ တောင်းဆိုတာမျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
လစာ ဘယျလောကျ တောငျးသငျ့သလဲ? Let’s figure out what you’re worth.
‘အလုပျရဖို့ ခကျလိုကျတာ…’ ဆိုတဲ့ ညညျးသံအမြားစုရဲ့တရားခံက ဒီအကွောငျးကွောငျ့ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီနိုငျငံမှာ နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီတှကေ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှေ အရှိနျရလာတဲ့အတှကျ အလုပျရှငျ၊ အလုပျသမားစြေးကှကျဟာ အပွောငျးအလဲကွီးတဈခုဖွဈလာပါတယျ။ ဒါဟာ ကောငျးတဲ့သကျရောကျမှုရှိသလို၊ မကောငျးတဲ့အခကျြတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဥပမာ၊ ကုမ်ပဏီတဈခုမှာ အလုပျလြှောကျတဲ့အခါ လစာဘယျလောကျတောငျးသငျ့သလဲဆိုတဲ့အခကျြက အစ ဆုံးဖွတျဖို့ မလှယျကူတော့တာတှရေ့မှာပါ။ အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့အခကျြတှကေ ကိုယျလစာ ဘယျလောကျတောငျးသငျ့သလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးအတှကျ အထောကျအကူဖွဈပါလိမျ့မယျ။
၁။ စြေးကှကျကို လလေ့ာပါ။
ဘယျကုမ်ပဏီမဆို ၀နျထမျးတှကေို ထိုကျသငျ့တဲ့လစာပေးဖို့ စဉျးစားတဲ့အခါ စြေးကှကျမှာ ဘယျလောကျ ရှိနသေလဲဆိုတာ အရငျလလေ့ာကွပါတယျ။ အဖွဈနိုငျဆုံးက ကိုယျ့ရဲ့ Competitor ပွိုငျဘကျကုမ်ပဏီက ဘယျလောကျပေးနသေလဲဆိုတာ ကွညျ့တတျကွပါတယျ။ ကိုယျက သူတို့အတှကျ မမြှတတဲ့ လစာကို တောငျးဆိုလိုကျမယျဆိုရငျ အလုပျအငျတာဗြူးဝငျနိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေးက နညျးသှားပါလိမျ့မယျ။ CV ပွငျတဲ့အခါ၊ အလုပျလြှောကျတဲ့အခါ အခြိနျယူရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အတှကျရော၊ သူတို့အတှကျရော အလကားအခြိနျကုနျတာမြိုးမဖွဈရအောငျ အစကတညျးက Company အနအေထားကိုကွညျ့ပွီး လစာကို တောငျးဆိုသငျ့ပါတယျ။
နိုငျငံတကာစံနှုနျးနဲ့ တိုငျးတာရငျပဲဖွဈဖွဈ၊ လကျတှအေ့ကဆြုံး လစာတိုးတောငျးသငျ့တဲ့အနအေထားကို စဉျးစားရငျပဲဖွဈဖွဈ ၄၀% ဟာ အသငျ့တျောဆုံး ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ၊ လကျရှိကုမ်ပဏီမှာ ဆယျသိနျးရနတေယျ ဆိုပါစို့။ အလုပျသဈကိုပွောငျးတဲ့အခါ ကိုယျ့ရဲ့မြှျောမှနျးလစာက ဆယျ့လေးသိနျးဝနျးကငျြဆိုရငျ ဒါဟာ အလုပျရှငျတျောတျောမြားမြား လကျခံစဉျးစားနိုငျတဲ့ ပမာဏတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါဟာ ပုံသနေညျး တဈခုမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျပွောငျးမယျ့ အလုပျသဈပျေါမူတညျပွီး အဆငျပွသေလို Adjust လုပျပွီး စဉျးစားသငျ့ပါတယျ။
၃။ ကိုယျ့ရဲ့ Flexibility ကိုကွညျ့ပါ။
Flexibility ဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့စားဝတျနရေေးအခွအေနအေတှကျ လုံလောကျမယျ့ ပမာဏတဈခုကို ပမျြးမြှတှကျခကျြကွညျ့ပွီး တောငျးဆိုရမယျ့ပမာဏကို ဆိုလိုခငျြတာဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ၊ ကိုယျက စားဝတျနရေေးအတှကျ တဈလကို သုံးသိနျးလောကျ ကုနျကတြယျဆိုပါစို့။ မိသားစုကို ထောကျပံ့တာ တဈသိနျး၊ ပွီးရငျ ကနျြးမာရေးနဲ့ တခွားမမွငျနိုငျတဲ့ အခွအေနအေကွောငျးတရားတှအေတှကျ တဈသိနျး ခနျြထားရမယျဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့တဈလစာဝငျငှဟော ငါးသိနျးထကျနညျးနရေငျ အလုပျကို သခြော အာရုံစိုကျနိုငျမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ ကိုယျဘယျလောကျပဲ ၀ါသနာပါတဲ့ပြျောတဲ့အလုပျပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝကို Balance ပကျြသှားနိုငျတဲ့ အလုပျမြိုးဆိုရငျ နှဈခါပွနျစဉျးစားသငျ့ပါတယျ။
၄။ အလုပျသဈရဲ့Location (နရော)၊ တခွား Benefits, Allowances နဲ့ ကိုယျ့အတှကျ Career Development တှကေို ကွညျ့ပါ။
လစာတောငျးမယျ့ ပမာဏကို ဆုံးဖွတျတဲ့အခါ မဖွဈမနထေညျ့ပွီး စဉျးစားရမယျ့အခကျြတှေ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့မြှျောမှနျးလစာကို ပေးနိုငျပမေယျ့ အလုပျနရောက အရမျးဝေးနတေဲ့အခါ ကုနျကမြယျ့ သှားလာစရိတျဟာ ထညျ့စဉျးစားရမယျ့အခကျြတဈခု ဖွဈလာပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ရနျကုနျလို Taxi တှနေဲ့ သှားလာရတဲ့မွို့ဆိုရငျ ပိုပွီးသခြောတှကျခကျြသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့ရဲ့ မြှျောမှနျးလစာကို မပေးနိုငျပမေယျ့ ဖယျရီရှိတာမြိုး၊ Saturday, Sunday ပိတျတာမြိုး စတဲ့ Facilities တှပေေးနိုငျမယျဆိုရငျတော့ ခုနကအခကျြကို လြှော့ပေါ့စဉျးစားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အထကျပါအခကျြတှဟော အလုပျအတှအေ့ကွုံရှိပွီးသား ၀နျထမျးတှကေို ရညျရှယျတာဖွဈပွီး ယဘေုယြ သဘော ဖျောပွထားတာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ အလုပျမလုပျဖူးသေးတဲ့ ဘှဲ့ရကာစလူငယျတှဆေိုရငျတော့ ကျိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့ ၀နျထမျးတှနေဲ့ ကိုယျအလုပျလြှောကျခငျြတဲ့ Company က ၀နျထမျးတှရေဲ့ အခွခေံလစာကို လလေ့ာပွီးမှ တောငျးဆိုတာမြိုး ဖွဈသငျ့ပါတယျ။